Tsy ara-dalàna ve ny varotrao?
Alatsinainy, Aogositra 30, 2010 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Ny mpisolovava David Castor, orinasam-mpisolovava iray manokana momba ny fanombohana sy ny orinasa SaaS, dia nandefa mailaka tamiko tamin'ny faran'ny herinandro niaraka tamin'ny vaovao fa ny FTC dia efa nifanaraka tamin'ilay niharan'ny lalàna fampahafantarana vaovao. Tafiditra ao anatin'ny volavolan-kevitra (PDF), ny orinasan'ny PR, Reverb Communications sy ny tompony, Tracie Snitker dia tsy maintsy manala ireo hevitra iTunes izay nosoratan'ny mpiasan'ny Resay ho mpanjifa tsotra ary tsy nahavita nampahafantatra ny fifandraisana misy eo amin'ny Reverb sy ny lalao
Zoma, Jona 11, 2010 Talata, May 3, 2016 Douglas Karr
Marina ny lazain'i Steve Jobs. Ny olona voalohany nanoro hevitra ahy haka blocker Flash dia Blake Matheny. Blake dia iray amin'ireo injeniera tsara indrindra nahafinaritra ahy niara-niasa - ary niara-niasa taminy aho na tao amin'ny Compendium na tany ChaCha. Heverinao fa mety nihaino tovolahy iray nanova ireo fotodrafitrasa sy sehatra iray manontolo farafahakeliny orinasa teknolojia roa farafahakeliny aho. Tsy nihaino azy aho. I
Nanofa mpisolovava izahay androany
Zoma, Septambra 5, 2008 Talata, Jona 25, 2019 Douglas Karr
Tsy zavatra ratsy io. Isan-kerinandro, mandritra ny herintaona mahery dia nanana fampahatsiahivana aho avy amin'ny zavatra 43 hanombohana orinasa iray mahomby. Baiko lava izany! Ny fananganana orinasa dia zavatra iray, ny fahombiazany dia zavatra hafa iray hafa. Nahita fahombiazana kely tamin'ny bilaogy aho ary manohy mandray anjara fanampiny noho ny bilaogy. Tamin'ity herinandro lasa ity, nanakatona fifanarahana lehibe 2 aho, izay maharitra amin'ny taonina